Iran: 20 taona an-tranomaizina, sazy tsy mbola fahita hatrizay ho an’ny bilaogera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Avrily 2019 4:21 GMT
(Marihina fa tamin'ny volana Jona 2011 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Manolotra fotoana fohy ho fakana aina ny fanoratana momba ireo bilaogera Iraniana. Tsy misy fiafaràny ny tantara mampalahelo ary toa tsy mihena ny fandrahonana. Toy ny hoe tsy ampy ny famoretana sy ny sivana, fa toa miseho ihany koa ny vintan-dratsy. Ny tantaran'ireo bilaogera telo, izay samy nanefa sazy tena maharitra ela tany Iran ireto manaraka ireto.
Bilaogera voaheloka 20 taona an-tranomaizina tany Zahedan, ao amin'ny faritanin'i Sistan sy Baluchistan i Sakhi Rigi, noho ny fiampangana azy tamin'ny famoahana vaovao tsy marina sy ny “hetsika manakorontana ny fiarovam-pirenena.” Ity no sazy lava indrindra nomena ny bilaogera tao Iran.
Antsoina hoe Balouchestan Sarfaraz (Rehareha ho an'ny Baluchistan) ny bilaoginy. Voasambotra ny 18 Jona 2009 i Rigi ary voatazona tao anatin'ny fepetra mampalahelo tao amin'ny fonjan'i Karon, ao Ahvaz. Nampiasaina ny fampijaliana mba hibabohany. Ankoatra ny vintan-dratsiny , nahavoarohirohy azy teo imason'ny manampahefana ny anarany mitovy amin'ny ny an'i Abdolmalek Rigi, ilay Balochi lehiben'ny vondrona Jundallah mpanohitra mitam-piadiana izay efa maty.
Nitatitra ny Sampan-draharahan'ny Mpiaro ny Zon'olombelona fa:
… 31 taona ilay bilaogera ary voasambotra enina andro taorian'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2009 ary nogadraina tao anaty efitrano irery nandritra ny fito volana … nianatra tany amin'ny oniversite izy ary volana vitsy monja sisa dia hifarana ny fianarany … toa fantatra fa ny lahatsorany no nahatonga azy higadra am-ponja.
Nisy lahatsoratra vitsivitsy momba ny fifidianana filoham-pirenena nampiady hevitra tamin'ny taona 2009 sy fanehoan-kevitra momba ny fanambaràna nataon'ny mpitarika ny mpanohitra Mir Hussein Mousavi tao amin'ny bilaoginy. Namoaka lahatsoratra momba ny tantara fahiny tao Balochestan ihany koa izy sy ny momba ny mpitondra fivavahana ambony indrindra amin'ny Sonita Miozolomana ao Iran.
Ny 8 Jona 2011, nilaza ny fianakavian'ilay bilaogera Iraniana Hossein Derakhshan fa nandà ny fangatahan'izy ireo ny fitsarana ary nanamafy ny sazy an-tranomaizina 19 taona sy tapany. Nosamborina izy tamin'ny taona 2008.
Tsy mbola nisy tatitra na vaovao farany momba ity lohahevitra ity tao amin'ny bilaogy nosoratana tamin'ny teny Farsi izay noforonin'ny fianakavian'i Derakhshan, Edalat Baraye Hossein Derakhshan (midika hoe Rariny ho an'i Hossein Derakhshan). Miresaka momba ny famotsorana vonjimaika an'i Hossein nandritra ny Taombaovao Iraniana volana Aprily ny lahatsoratra farany .
Nilaza tamin'ny Fanentanana Iraisam-pirenena ho an'ny Zon'olombelona any Iran ny loharanom-baovao fa nangataka fivoahana ny fonja vonjimaika i Derakhshan taorian'ny niampangan'ny fitsarana ambaratonga voalohany azy higadra 19 sy tapany taona an-tranomaizina tamin'ny volana Septambra 2010.
Nandefa kopian'ny mailaka nifanakalozany tamin'i Derakhshan nandritra ny fotoana fohy nivoahany ny fonja ilay bilaogera sady mpanoratra Cyrus Farivar.
Vakio bebe kokoa ny momba an'i Derakhshan ao amin'ny Global Voices Advocacy. Natsangan'ireo mpikatroka miaro ny fahalalaham-pitenenana an-tserasera ny bilaogy Free Hoder fotoana fohy taorian'ny nisamborana azy.
Voasazy higadra 15 taona an-tranomaizina ilay bilaogera Iraniana Hossein Rongahi Maleki ary nijaly tamin'ny olana ara-pahasalamana. Nitatitra ny HRNA fa nolavina ny fahazoany fikarakarana ara-pitsaboana. Nahemotra fanintelony ny fandidiana azy faharoa .
Fanentanana ao amin'ny aterineto izay natomboka hanomezana vaovao momba ity bilaogera voafonja ity ny Avotsory Hossein. Nanolo-tena ho “komity manaraka ny raharahan'i Hossein” ny Free Hossein. Araka ny fanentanana hoe:
Manana olana ara-pahasalamana amin'ny voa sy ny vava i Hossein ary ao anaty fijaliana tanteraka. Nanoratra taratasy izy mikasika ny fomba nampijalian'ireo mpiasan'ny Minisiteran'ny Fitsikilovana azy tamin'ny fanerena azy hibaboka tamin'ny mpampanoa lalàna, saingy nalaina an-keriny ilay taratasy.
Nosamborina i Hossein tamin'ny volana Novambra 2009 ary nogadraina tao anaty efitrano mitokana nandritra ny herintaona mahery.
Amin'ny vaovao hafa …
Nosamborina tany Iran i Ali Pour Soleiman, bilaogera sady mpampianatra. Mpikambana ao amin'ny Fikambanan'ny Mpampianatra izy ary nanoratra tao amin'ny bilaogy Sokhane Molem (midika hoe tontolon'ny mpampianatra).
Notorian'ny Biraom-panjakana ho an'ny Fiarovana ny Tontolo Iainana ao amin'ny faritanin'i Chahrmahal Bakhtyari i Houman Khakpour, bilaogera miresaka momba ny tontolo iainana ao Iran, noho ny fampitandremana amin'ny loza ateraky ny tetikasan'ny fantsona mitondra etona manoloana ny tontolo iainan'ny faritra.
Inoana fa ny hany vaovao tsara dia ny famadihan'ny fitsarana tampony ao Iran ny sazy fanamelohana ho faty an'ilay mpamolavola rindrambaiko sy tranonkala Saeed Malekpour izay voampanga ho namorona tranonkala mamoafady sy nanevateva ny finoana Islamo.
Ny tatitra tsy voamarina maro momba ireo bilaogera sy mpikatroka an-tserasera nogadraina no vaovao ratsy. Miatrika ny ‘ririnina amin'ny lohataona’ indray ireo bilaogera Iraniana.